ESI GBANYỤỌ MMELITE WINDOWS - WINDOWS - 2019
Esi gbanyụọ mmelite Windows
Na-ebugharị oku na nọmba ọzọ bụ ọrụ a chọrọ. Taa anyị ga-agwa gị otu esi hazie ya na ngwaọrụ na-agba ọsọ gam akporo.
Kwado oku na-ebugharị na ama
Ọ dị mfe ịtọlite ​​ma hazie oku na-agagharị na nọmba ọzọ. Otú ọ dị, tupu ịmalite ịmalite ọrụ, jide n'aka na atụmatụ tarifu nke ụgbọelu ahụ, nke a na-eji na ekwentị omenala, akwado ọrụ a.
Na atụmatụ tarifu n'enweghị ikike redirection, a gaghị enwe ike ịhọrọ nhọrọ a!
Ị nwere ike ịlele tarifụ ahụ site n'enyemaka nke ndị na-ahụ maka ọrụ dika My Beeline ma ọ bụ My MTS. Mgbe ijiri n'aka na ọrụ dị na ya dị, gaa n'ihu ya.
Lezienụ anya! A kọwara ntuziaka ndị a ma gosipụtara na ihe atụ nke ngwaọrụ na mbipute nke Android 8.1! Maka smartphones na usoro ochie nke Os ma ọ bụ onye na-emepụta ihe ndị ọzọ, algọridim yiri ya, mana ebe na aha ụfọdụ nhọrọ nwere ike iche!
Gaa "Ndi ana-akpo" ma pịa bọtịnụ ahụ na mkpịsị ụkwụ atọ n'akụkụ aka nri. Họrọ "Ntọala".
Na ngwaọrụ nwere kaadi SIM abụọ ị ga-achọ ịhọrọ "Kpọọ Akaụntụ".
Mgbe ahụ kpatụ kaadị SIM achọrọ.
Na ngwaọrụ ndị na-ejikọta ọnụ, a na-akpọ nhọrọ achọrọ "Ihe ịma aka".
Chọta ihe "Oku na-aga n'ihu" ma pịa ya.
Ekem akọrọ "Oku na-akpọ".
Window maka ịtọ oku na nọmba ndị ọzọ ga-emeghe. Nagide ọnọdụ ị chọrọ.
Dee nọmba achọrọ na ubi ntinye wee pịa "Kwado"ime ka oku ebughari.
Emeela - ugbu a oku na-abata na ngwaọrụ gị ga-ebutegharị gaa na nọmba ahụ akọwapụtara.
Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro ahụ dị mfe ma na-agba ọsọ na ọnyà ole na ole na ihuenyo. Anyị nwere olileanya na ntụziaka a bara uru maka gị.